“Ciyaartoydeeda dhibaato ayay qabaan.”. Jose Mourinho oo weeraray xiddigihiisa xilli ay guul gaareen – Gool FM
“Ciyaartoydeeda dhibaato ayay qabaan.”. Jose Mourinho oo weeraray xiddigihiisa xilli ay guul gaareen
Byare November 7, 2016
Optimized by JPEGmini 3.11.5.0 0xde4eecd0
(Manchester) 07 Nof 2016. Jose Mourinho ayaa su’aal galiyay dhabar adeega iyo adkeysiga ciyaartoydiisa iyadoo ay jirto inay guul ka gaareen Swansea City.
Red Devils ayaa shalay 3-1 uga adkaatay Swansea si ay u soo af jarto afar kulan oo guulal la’aan ah horyaaka Premier League.
Mourinho ayaa lagu qasbay inuu is badel ku sameeyo daaficiisa u safrayay Liberty Stadium iyadoo Chris Smalling iyo Luke Shaw ay goor dambe ka bexeen shaxda, Daley Blind ayaana ahaa daafaca kaliya ee taam ah kuwa keydka ku jira.
Ashley Young, Phil Jones, Marcos Rojo iyo Matteo Darmian ayaa dhammeystiray afarta dambe ee daafaca Man United kulankii shalay, Jose Mourinho ayaana erayo ku tuuray ciyaartoyda nafsadooda u arka inaysan taam u ahayn kulanka.
“Waxaan leeyahay saaxiib kaa oo ah ciyaaryahan wayn oo ciyaara Teeniska, wuxuuna ii sheegay inuu xusuusto mararka uu xanuunka ku ciyaaro in ka badan inta uusan xanuunka ku ciyaarin,” Mourinho ayaa sidaa yiri.
“Si aad u tartanto waa inaad sameysaa wax kasta oo suuro gal ah, dhaqankaas waxaa leh dadka qaar, ma ahan dhaqankeyga, Man United ayaana iga sii badan.
“Waxaan leenahay ciyaartoy dhibaato qabta, ciyaaro kasta, waana ogahay maxaa yeelay waxaan qabaa saaxiibo kale oo dheesha ciyaaraha kale, heerka ugu sarreeya ayayna dheelaan ciyaarahooda, imise jeer ayayna ciyaaraan marka aysan 100% taam ahayn.”.
Man United ayaa iminka ku jirta kaalinta 6-aad ee Premier Leauge kaddib 11-kulan, waxayna 8-dhibcood kor u fiirineysaa Liverpool oo hogaanka heyso xilli lagu sii jeedo fasaxa kulamada caalamiga.
“Is-taabasho Rigoore laguma dhigo ee qalad ayaa Rigoorada lagu dhigaa.” Arsene Wenger oo su’aal wayn galiyay go’aankii gool ku laadka loogu dhigay Tottenham
Ibrahimovic: Waxaan u qabay in aan kaligey dhaliyey 2,5000 oo gool!